Etu ị ga-esi mee ka nchebe Google Chrome bulitere na Android | Gam akporosis
Ihe nchọgharị Google Chrome emeela ka ngalaba nchekwa ka mma ime ka o sie ike n’iru otutu egwu di na Ntaneti. Mmelite dị iche iche nke ihe nchọgharị ahụ na-eme ka ọ dozie ọtụtụ ihe, mana ọ bụ ezughị ezu ichebe anyị kpamkpam.
Site ndabara ngwa na-abịa na ọkọlọtọ nchedo, otu n'ime ihe ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị na-eji ya na gị gam akporo ngwaọrụ ọtụtụ mgbe. Ọ dị mma iji rụọ ọrụ nke nwere nkwalite iji chebe onwe gị pụọ na phishing, otu n'ime usoro ndị ndị mwakpo na-ejikarị ezu ohi ozi ndị ọrụ.
Enwekwu nchebe na-adaba adaba n'ọnọdụ niile site na ịmalite ime ihe, dị ka isi ọjọọ bụ na ọ ga-eziga data nchọgharị na Google. Ọ bụrụ na ịhọrọ ịhapụ ya na enweghị nchebe, a ga-ekpughere gị ihe niile, ọ bụrụ na ọ bụ web peeji nke aghụghọ, phishing, malware na egwu ndị ọzọ dị na ntanetị nke netwọk.
1 Etu ị ga-esi mee nchọgharị echekwara na Google Chrome na gam akporo
2 Nchedo ọkọlọtọ na Google Chrome
3 Enwekwukwa nchebe
Etu ị ga-esi mee nchọgharị echekwara na Google Chrome na gam akporo
Google site na blọọgụ gọọmentị ya na-atụ aro ọkọlọtọ ma ọ bụ nchekwa dị mma, nke ga-emeso ihe niile dị egwu ma na-emerụ ahụ. Usoro ole na ole ga-ezu maka nhazi ya Ọ bụghịkwa ihe mgbagwoju anya dịka ọ dị ka ọ ga-agbanwe site na nchekwa nchekwa na nchekwa echekwara.
Iji rụọ ọrụ enwekwukwa nke Google Chrome na gam akporo ị ga-eme ihe ndị a:
Ẹkedori Google Chrome ngwa na gị gam akporo ngwaọrụ, ma ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba
Ugbu a n'elu aka nri, pịa isi ihe atọ wee pịa Ntọala
Ozugbo n'ime, chọta «Nzuzo na nche», pịa ya na ohere «Nchekwa nchọgharị»
Ugbu a họrọ nchebe kachasị mma, ọkọlọtọ ma ọ bụ nke ka mma, ihe dị iche dị ukwuu ma anyị ga-egosi gị nkọwa niile nke abụọ ka ị nwee ike ịhọrọ otu
Nchedo ọkọlọtọ na Google Chrome
Ọkọlọtọ nchebe na-achọpụta ma dọọ gị aka na ntị banyere ihe egwu dị egwu mgbe ha mere.
Lelee URLs echekwara na Chrome megide ndepụta nke weebụsaịtị ha adịghị nchebe. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-anwa izu ohi paswọọdụ gị ma ọ bụ na ị budata faịlụ ọjọọ, Chrome nwere ike izipu URL, yana snippets nke ọdịnaya peeji, na Nchọgharị Nchekwa.
Nyere aka melite nchebe weebụ: Ziga Google URL nke ibe ndị ị gara, obere usoro ihe ọmụma, yana ọdịnaya peeji iji nyere aka chọpụta ihe iyi egwu ọhụrụ ma kpuchido ndị ọrụ weebụ. Nhọrọ a nwere ike ịrụ ọrụ site na onye ọrụ.
Gwa ma oburu na okwuntughe gi gosiputara n’ime ihe nche data, a ga-arụ ọrụ a site na ịbanye na akaụntụ Google gị. Emechara ya, ma ọ na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ ya.
Na-ebu amụma ma na-adọ gị aka ná ntị banyere ihe ndị dị ize ndụ mgbe ha mere
Ọ na-echebe gị na Chrome ma enwere ike iji ya iji melite nchebe gị na ngwa Google ndị ọzọ mgbe ị banyere
Meziwanye nchebe gị na nke onye ọ bụla na weebụ
Mata gị ma ọ bụrụ na okwuntughe gị ekpughere na nchekwa data data
Zipu URL na nchọgharị dị mma maka ịlele. Ọ na-eziga a obere sample nke peeji nke, downloads, ndọtị ọrụ, na usoro ọmụma aka ịchọpụta ọhụrụ egwu. Mgbe ị banyere, jikọọ ndị a na akaụntụ Google gị nwa oge iji chebe onwe gị na ngwa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi eme ka nchedo Google Chrome meghariri na gam akporo